Entprima - Mozika sy bebe kokoa | Fanambarana ny mpanorina Horst Grabosch
Rehefa mihalehibe ianao dia manomboka mieritreritra ny dikan'ny fiainanao taloha sy ny ho avy. Amin'ny maha-mpihorohoro ny fiainana matetika ny mpanakanto, dia miharihary fa afaka mametraka ny tenanao amin'ny toeran'ny olona hafaozongozona ianao. Antsoina hoe fiaraha-miory. Ny ankamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo izao dia mila miady mafy amin'ny ainy, na dia tsy misy ady aza. Tsy mila azy ireo hiaina fijaliana izy ireo. Te hanome feo fanampiny an'ireo olona ireo aho. Resy lahatra tanteraka aho fa ity ankamaroan'ny olombelona mangina ity dia tsy maniry afa-tsy tontolo manetry tena sy milamina.
Raha safidy azo nofidina io dia zara raha misy manenjika firehan-kevitra hafa. Tsy maintsy mamakivaky ny herin'ny mpanangana hevitra isika hampitsahatra ny fahantrana. Tsy kapitalista na kominista aho - mponina eto amin'ity planeta ity aho, ary manan-jo hanana ny hareny. Voafidy ny mpanao politika ary omena karama hizara sy hitahiry izany ary handrindra ny fiarahamonin'olombelona - tsy hanome fahafaham-po ny fahatsapany manokana. Ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga amin'ireo mpanao politika fehezin'ny vahiny dia ny firaisankinan'ny olona manerantany amin'ireo fitakiana fototra ireo. Andao hiara-manao ampahibemaso izy ireo. Fehezan-teny iray monja io: "Andao hiaina amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny filaminana!"
Nefa inona no dikan'izany ho an'ny mozika? Rehefa dinihina tokoa, ity dia tranonkala mozika. Tena io indrindra ny fanontaniana nanontaniako ny tenako taorian'ny taona voalohany niverenako tamin'ny naha-mpitendry mozika azy. Ny zavatra hitako dia nahatonga ahy hatoky tena kokoa amin'ny maha-mpanakanto azy, saingy nofinofy ho an'ny marketing, satria ny tanjona ambony indrindra amin'ny tsena dia ny sary sary voafaritra mazava miaraka amina fijerena mampiavaka azy.
Na izany aza, ny fomba ataoko dia tsy tokony ho zava-bita raha tsy hatsaran-tarehy endriko mahafinaritra. Ilaina amiko ny tononkira natokan-tena izay mamaritra ny fahantrana, saingy noho izy ireo dia mitarika ny fahaketrahana amin'ny olona saro-pady fa tsy hanova na inona na inona dia ilaina ny fanisaanana. Na izany aza, tiako ny olona hahatsapa hery na dia eo aza ny fahalalana ny fahantrana eto amin'izao tontolo izao, satria raha tsy izany dia tsy hisy na inona na inona hiova.
Izany no antony nanapahako hevitra hamorona ity counterweight ity amin'ny moziko ihany koa. Ho an'ity tanjona ity dia namorona piraofilina mpanakanto roa vaovao aho, izay natokana ho an'ny fialan-tsasatra an-dàlana mankany amin'ny filaminana sy fifaliana amin'ny fiainana amin'ny endrika dihy. Na inona na inona dikan'izany amin'ny fahafahako miditra amin'ny tsenan'ny mozika - io no làlako.
Voalohany dia nieritreritra izay maharary ny fanahiko indrindra aho ary zavatra telo no tonga: fanamavoana - fahantrana - famoizam-po. Ary ireo zavatra ireo dia tsy nahakasika ahy manokana fotsiny, fa nahatsapa izany ho toy ny fanitsakitsahana aho rehefa misy ifandraisany amin'ny olon-kafa. Raha fintinina dia nidika ny tolona manerantany ho an'ny mifanohitra amin'izany:
Tsy idealista aho ary indraindray ny fitiavana dia zavatra tsara loatra ho ahy. Heveriko fa ampy ny fanajana izay manilika ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanindrahindram-pirenena. Ny fanajana koa dia mamela ny fialan'ny tenanao manokana raha ny toe-tsaina hafa amin'ny fiainana mifanohitra be loatra amin'ny an'ny tena.
Havana hatrany ny harena. Saingy homeko ny olon-drehetra hanana zo hanana sakafo ampy, tampon-trano manarona ny lohan'izy ireo ary ny fotoana hampivelarana ny talentany. Raha mieritreritra ny olona sasany fa mila mitazona ny elanelan'ny fanambinana ankehitriny, dia tokony hividy fiara lafo vidy vitsivitsy izy ireo - inona izany - tsy kominista aho.
Ireo fitakiana roa voalohany dia fepetra takiana amin'ny fametrahana ny fahatoniana ho an'ny mahantra. Azo heverina ho fanamby lehibe ho an'ny rehetra manankarena izany, satria raha ny hevitro dia ny fikatsahana ny FAHADIANA-FIAINANA-FAHAFAHANA dia tsy hafa fa ny ady amin'ny fahantrana miady amin'ny fahantrana hatrany amin'ny rafitra sosialy misy.
Horst Grabosch no anarako ary izaho no tompon'andraikitra amin'ireo tetikasa rehetra naseho amin'ity tranokala ity.
Teraka tao amin'ny faritra lehibe fitrandrahana arintany aho tany Alemana, fantatra amin'ny anarana hoe "Ruhrgebiet". Niasa ho mpitendry zavamaneno matihanina aho mandra-pahatongan'ny 40 taona. Voarakitra an-tsoratra tsara ity fotoana ity Wikipedia
Taorian'ny fahapotehana dia voatery namoy ny asako aho, nifindra tany atsimon'i Alemaina, nankany amin'ny faritr'i Munich, ary nanao fiofanana ho teknisiana fampahalalana.
Fahamaizana iray hafa no nanery ahy hanangana ny fisiako indray, izay nianjera fotsiny noho ny krizy corona. Miandry ny fahantrana amin'ny vanim-potoana fisotroan-dronono, nanomboka nanangana asa faharoa aho tamin'ny maha mpanakanto azy tamin'ny 2019.
Avy amin'ny Channels Video
Vaovao farany mpankafy
Ny fifanolanana misy eo amin'ny tanora sy ny antitra dia antsoina koa hoe fifandimbiasan'ny razana. Fa maninona no misy izy ireo? Andao hojerentsika izany. Voalohany, andao hotadidintsika ireo dingana samihafa amin'ny fiainana.
Miala tsiny indrindra aho fa tsy nanana fotoana ampy teo amin'ny fiainana ianao, SOPHIE. Saingy tsy hanadino anao velively ny mpankafy anao, ary tahaka ny androany dia manana mpankafy vaovao ianao - RIP
Mampalahelo fa ny "mozika elektronika" dia nanjary niorina tamin'ny mozika pop ho karazana famaritana fomba. Tsy hoe diso amin'ny fotony fotsiny izany fa manodikodina ny fomba fijery ny rehetra ho an'ny tanora mpihaino.
Misafotofoto ve ny fahasamihafana?
Tsy mifanentana amin'ny zato isan-jato amin'ny fironana ankehitriny ianao, ka tsy hahazo dingana misy
Tsy demokratika amin'ny fotony izany raha tazonina ho velona hatrany ny rafitra manome lanja. Ny lalana manapa-kevitra ho an'ny rafi-pitiavan'olombelona sy ara-drariny dia napetraka amin'ny fampianarana.